गर्भवती भएको थाहा पाउने ? डिम्ब निस्केको कसरी थाहा पाउने ? | how to know pregnant or not
ramkrishna December 28, 2017	healthhow to know pregnant or notगर्भवती भएको थाहा पाउनेडिम्ब निस्केको कसरी थाहा पाउने
म १९ वर्षकी भएँ। हामी शिशु जन्माउने उद्देश्यले भेट्छौं। पछिल्लो पटक महिनावारीको १३ दिनमा एकै समयमा दुई पटक सम्पर्क गर्‍यौं तर योनिमा वीर्य झरेन। अहिलेसम्म अर्थात् १७ औं दिनसम्म कुनै डिम्ब निस्किएको छैन। म गर्भवती भए वा भइनँ पक्का हुन चाहन्छु । यदि भएको भए त्यसबाट बच्ने कुनै उपाय छ?
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एकमात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधंै यस्तो हुँदैन। गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुनुपर्छ। शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको बेला हुनु आवश्यक छ। महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ। डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ। डिम्ब निस्केको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ। २८ दिनमा महिनावारी हुने महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले यो समयमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। डिम्ब निस्केको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन् अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ त्यसैले डिम्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारणका दृष्टिकोणले असुरक्षित काल मानिन्छ। सामान्यतः महिनावारी सुरु भएको आठौं दिनमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ। नियमित यौनसम्पर्क गर्दा एक सामान्य दम्पतीको महिनामा यस्तै १५ देखि २५ प्रतिशत गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। चार-पाँच महिनामा यो यस्तै ५० प्रतिशत अनि एक वर्षमा यस्तै ८० प्रतिशत पुग्छ, तर महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो-चाँडो हुन्छ भने केही सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो भरपर्दो नहुन सक्छ।
डिम्ब निस्किएको कसरी थाहा पाउने?
अहिले चिकित्सा प्रविधिको प्रयोग गरेर डिम्ब निष्कासन भएको सही समय थाहा पाउन सकिने भए पनि सामान्य महिलालाई यो कुरा थाहा पाउन सजिलो छैन। महिनावारीको बीचमा पेट दुख्नु नै डिम्ब निष्कासनको लक्षण हुन सक्छ। यसलाई mittelschmerz भनिन्छ। जर्मन भाषा mittel को अर्थ ‘मध्य’ schmerz को अर्थ ‘पीडा’ हुन्छ। यस्तो पीडा छोटो तथा तीव्र पनि हुन सक्छ। यो पीडा सामान्यतः महिनावारीमा हुने पीडाभन्दा केही फरक हुन्छ। यो पेटको एकातिर मात्र दुख्छ। यो अकस्मात् दुख्छ। पीडा तीखो किसिमको हुन्छ। सामान्यतः केही मिनेट मात्र पीडा हुन्छ भने कसैलाई यस्तो केही घण्टा वा एक दिनसम्म पनि हुन्छ। जुन डिम्बाशयवाट डिम्ब निस्किएको हो पेटको त्यतैतिर दुख्छ। यस्तो दुखेको यस्तै दुई हप्ता (१४ दिन) पछि अर्को महिनावारी सुरु हुन्छ। तपाईंले डिम्ब निस्किएको छैन भनेर कुन आधारमा भन्नुभयो सो कुरा बुझ्न अलि सकिएन।
गर्भको सुरुवात पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएको डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रूपमा १. डिम्ब निस्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्ब रोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्केका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बवाहिनी नलीमा पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बसँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ।
सन्तान जन्माउन नसक्नुमा केही कारण पुरुषमा हुन्छ भने केही कारण महिलामा हुन्छ। त्यसैगरी केही कारण दुवै जनामा संयुक्त रूपमा हुन्छ। करिब १० प्रतिशतजति यस्ता घटनामा सन्तानहीनताको कारण नै पत्ता लाग्दैन। पुरुषको सन्दर्भमा पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ शुक्रकीट उत्पादन भैरहेको छ वा छैन विचार गर्नुपर्छ। यो वीर्य परिक्षण गरेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। महिलाको सन्दर्भमा शरीरमा कतिपय हार्मोनको गडबडीका कारण पनि सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने हुन्छन्। केही परिस्थितिमा मानसिक कारण पनि भेटिएको छ। महिलाको प्रजनन अंगसँग सम्बन्धित विकारहरूका कारण सन्तान जन्माउन नसक्ने हुनु सबैभन्दा प्रमुख कारण हो। पाठेघरभित्र मासु बढ्ने, पाठेघरको भित्री तहको खराबी वा संक्रमण (जस्तै क्षयरोग) वा अन्य खराबी भए पनि सन्तान जन्मन नसक्ने हुन्छ। विभिन्न कारणले डिम्बवाहिनी नलीको संक्रमण हुन गए यो नली बन्द हुन सक्छ। यो नली बन्द भए डिम्ब तथा शुक्रकीटको मिलन हुन नसक्ने भयो। कतिपय यौनरोग डिम्बवाहिनी नली बन्द हुनुका प्रमुख कारक हुन्। निःसन्तान महिलाहरूमा हुने कारणहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने पाठेघरको मुखसँग सम्बन्धित खराबीहरू गर्भधारण हुन नसक्नुका कारण हुन्छन्। कतिपय जटिल दीर्घरोग वा कडा शारीरिक रोगका कारणले पनि सन्तान जन्माउन सक्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पार्छ।
आशा गर्छु, तपाईंले आफ्नो जिज्ञासाको जवाफ पाउनुभयो तर तपाईंले फरक कुरा सोध्नुभएको हो भने पुनः सोध्न अनुरोध गर्छु। अन्तमा, अहिले भर्खरै १९ वर्षको उमेरमै किन शिशु पाउने प्रयास गर्नुभएको हो, सोचाहिँ बुझिएन।
Previous Previous post: दाँतको किरा मार्ने घरेलु उपाय, अनि दाँत सम्बन्धी अन्य रोगका निम्ति पनि उपयोगी छ
Next Next post: गर्भपतन कहिले र कसरी गर्न सकिन्छ